Rabshado ka dhacay dekedda Muqdisho oo waxyeelo u geystay 2 shaqaale ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Rabshado ka dhacay dekedda Muqdisho oo waxyeelo u geystay 2 shaqaale ah
Mareeg.com: Muruq-maalatada dekedda Muqdisho iyo ciidamo boolis ah ayaa maanta iskula dhacay gudaha dekedda, waxaana dhaawacyo fudud soo gaareen 2 ka mid ah shaqaalaha.
Iska hor-imaadka ayaa yimid kadib markii shaqaale Soomaali ah oo doonayey iney markab alaab ka dejiyaan uu halkaas soo gaaray wiish ay leedahay shirkadda Turkiga ah ee Albayrak, taasoo dhawaan lagu wareejiyey maamulka dekedda Muqdisho.
Shirkadda Turkiga ah ee Albayrak ayaa sheegtay ineysan qaadi Karin shaqaalihii faraha badnaa ee horay uga shaqeyn jiray dekedda Muqdisho, taasoo keentay in maalmihii laso dhaafay ay debadbaxyo dhigaan kumanaan ka tirsan shaqaalaha muruqmaalka ah ee Muqdisho.
Qaar ka mid ah muruqmaalka dekedda Muqdisho oo warbaahinta maanta la hadlay ayaa sheegay in labada qof ee dhaawacantay ay dhaawaceen nin ka tirsan booliska Soomaaliya iyo nin Turki ah oo saarnaa Wiishka, kaasoo ay sheegeen inuu ridayey bastoolad.
Ma jiro war kazoo baxay booliska Soomaaliya iyo shirkadda Turkiga ah ee Albayrak, oo ku saabsan dhaawaca muruqmaalku sheegeen in loo qeystay qaar iyaga ka mid ah.
Baarlamaanka Soomaaliya oo horay u diiday in shirkadda Albayrak algu wareejiyo dekedda Muqdisho ayaa todobaadkan mooshin ka keenay shirkadaas, waxaana R/wasaare C/weli looga reeyay baarlamaanka, iyadoo laga sugayo inuu baarlamaanka jawaabo ka siiyo sababta shirkadaas dib loogu soo celiyey iyadoo baarlamaanku horay u diiday ilaa laga dhameystirayo sharciga maalgashiga shisheeye.
R W Cabdiweli oo saaka dalka kusoo laabtay & isbadello ka dambeeyey
Daawo: Diyaaradda ugu cajiibsan dunida